Nezvedu - Dongguan Guta BiGa Grating Machinery Co., Ltd.
Dongguan Guta Biga Grating Machinery Co., Ltd.yakagadzwa muna1996, tinoramba tichienderera mberi, ikozvino chikuru bhizinesi chiyero ndechekuti: kutsvagisa uye kugadzirwa kweiyero chiyero, magnetic chikero Dhijitari Readout system, pamusoro pekugeda muchina, gantry pamusoro kukuya muchina, EDM gomba kuchera muchina, EDM waya yekucheka muchina, chifananidzo chekuyera chiridzwa, 3 axis / 5 axis machining centre, laser yekucheka muchina, carves-yekugaya muchina uye EDM muchina. Nezve mushure mekutengesa sevhisi, Rutsigiro rwepamhepo, Vhidhiyo technical rutsigiro, Mahara eparutivi zvikamu, Kuisirwa kweMunda, kutumwa uye kudzidziswa, Kuchengetwa kweMunda uye basa rekugadzirisa zvichapihwa. Nekuda kwekushandisa zvisirizvo kwemushandisi kunotungamira mukukuvara, zvigadzirwa zvakagadziridzwa zvinobhadhariswa chete pamutengo wemutengo kumutengi.
Muna 2000, takavaka fekitori yeEDM muDongguan, kusvika zvino tanga tave nemakore makumi maviri ekugadzira ruzivo uye nhoroondo yegore rekutengesa kunze. Maitiro ese anosanganisira muchina chishandiso dhizaini, gungano uye kunyatso kuongorora kunoenderana neiyo SOP (Standard Operating Procedure) manejimendi maitiro. Panyaya yezvinhu zvakagadzirwa, tinoshandisa zvikamu zvepamhando yepamusoro zvinobva kuGerman, Japan, Taiwan neSwitzerland. Mupepeti akakodzera anofanirwa kuvimbika, uyo ane hunyanzvi uye pfungwa yebasa; Nezve chigadzirwa chemhando yekudzora, pamwe nekuongororwa kwemhando yepamusoro michina kubva kuUnited States (API) neJapan (NIKON), mhando yacho inovimbiswa zvakanaka.
Kambani yedu inobata mutemo webasa rebasa uye hunoshamisa hunhu hunoteedzera kubva kugona kusvika pakukwana. Isu tagara takaomerera kune yakasarudzika sevhisi inoenderana neyemberi sainzi uye tekinoroji. Kuti tione zvinangwa izvi, kambani yedu ichaita chirongwa chebasa rakasarudzika zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi vese, zvichidaro kubatsira vashandisi kuzadzisa zvinangwa zvavo.
Bhizinesi redu rinofukidza Hong Kong, Taiwan, Singapore, South Korea, Turkey, Southeast Asia, Middle East Asia, India, Europe, America, etc. Tinogona kupa basa rekuchengetedza muVietnam. Uye ikozvino isu tinonakidzwa chaizvo yakakwana yakakwana sevhisi sevhisi network. Iwo makuru matunhu, ane mahofisi uye madhipatimendi eanotengeswa-sevhisi sevhisi, inopa yekutanga-kirasi sevhisi kune vatengi. Tinotarisira nemoyo wese uye tinovimbisa kuti zvatinoita zvichaita kuti vatengi vedu vagutsikane.
Gantry Yakapetwa Musoro Wepamusoro Kugaya Machine, Gantry Surface Kukuya Machine, Gantry Imwe-Yekupedzisira Surface Kukuya Machine, Gantry Imwe Musoro Wepamusoro Pamusoro Kugaya Muchina, Gantry Rudzi rwepamusoro Kugaya Machine, Gantry Double-End Surface Grinding Machine,